डचटाउन चलचित्र नाइट्स • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन चलचित्र रातहरू
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन गर्मी को समयमा मार्केट पार्कमा परिवार मैत्री चलचित्र राती होस्ट गर्दछ। तपाईं, तपाईंको परिवार, तपाईंको छिमेकीहरू, र सबैलाई आमन्त्रित गरियो! यी घटनाहरू हुन् मुक्त समुदाय लाई।
हामी आशावादी छौं कि २०२१ मा महामारी बितिसकेको छ र हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग सदाझैं नजिकबाट भेला हुन सक्षम हुनेछौं। हामी अझै चलचित्रहरू चयन गर्दैछौं, तर तपाईं आफ्नो क्यालेन्डरमा यी मितिहरू राख्न सक्नुहुनेछ:
शनिबार, जून 5th
शनिबार, जुलाई 24th
शनिबार, अगस्त 28th
हामीसँग खाना ट्रक र सामुदायिक स have्गठनहरू हातमा साढे :7: .० देखि सुरू हुनेछ, र चलचित्र यो अन्धकार हुने बित्तिकै हुनेछ।
प्रायोजक डचटाउन फिल्म रातहरू
प्रायोजनको बारेमा हामीलाई सोध्नु यो त्यति चाँडो कहिले पनि होइन! हामी प्रमोशनल सामग्रीहरूमा तपाईंको नाम वा लोगो समावेश गर्न प्रबन्धहरू प्रस्ताव गर्दछौं, र हामी यो भिडियो चलचित्र अघि "पूर्वावलोकन" को समयमा पनि देखाउन सक्छौं। हाम्रो साथ सम्पर्कमा जानुहोस् प्रायोजन विकल्पहरू छलफल गर्न।
भूत चलचित्र रातहरू
डीटी २ र मार्क्वेट पार्कका एलिसहरूले २०१2को गर्मीमा मार्किट पार्कमा चलचित्र कार्यक्रमहरूको पहिलो श्रृंखला होस्ट गरे। डचटाउन फिल्म नाइट २०२० मा जारी रह्यो, COVID-१ p महामारीको समयमा डचटाउन समुदायका लागि पारिवारिक मैत्री र सामाजिक रूपमा टाढा मनोरन्जनको प्रस्ताव राख्दै।
२०१ Movie चलचित्र नाइट्स
युवा चलचित्र रात: कालो पेन्थर
मार्क्वेट पार्कमा हाम्रो पहिलो फिल्म रात एक ठूलो सफलता थियो! १०० भन्दा बढी छिमेकीहरू मार्भलको हेर्न बाहिर निस्के काला Panther ठूलो पर्दामा, र दर्जनौं बच्चाहरू नि: शुल्क पिज्जा, पपकोर्न, र टेड ड्र्यूज फ्रोजन कस्टर्डको आनन्द लिन पाए।
डाइभ-इन फिल्म कोष स :्कलनकर्ता: छप्पर
यो हाम्रो डाइभ-इन फिल्म कोष सra्कलनकर्तामा वर्षा भएको हुन सक्छ, तर दाताहरूले अझै पूलमा सुधारको लागि $ 7,000 भन्दा बढी बढाउँदै ठूलो स्प्लश बनाए। यहाँ यसको बारेमा पढ्नुहोस्.
डाइभ-इन फिल्म: मोआना
पूल साइड डिस्नेको प्रदर्शन मोना अगस्त १०, २०१ 10 ले मार्केट पार्क पोखरीमा ढिलो राती पौंडी खेल्ने र मनोरन्जनका लागि पर्याप्त भीड तान्नुभयो।
२०२० डाउनटाउन डचटाउन ग्रीष्मकालीन चलचित्र श्रृंखला द्वारा प्रायोजित हो DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, जीन स्लेको केटीहरू र सेन्ट लुइसको केटाहरू क्लब, मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास, लुथरन विकास समूह, मूल क्रूसो भोजनालय, पादुआको सेन्ट एन्थोनी, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम
ड्राइभ-इन चलचित्र: स्वतन्त्रता दिवस
DT2 र मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास जून २th, २०२० मा हाम्रो पहिलो ड्राइभ इन फिल्म होस्ट गरियो।
60० भन्दा बढी कारहरू ड्राइभ-इनमा साथ, उपस्थित भए स्वतन्त्रता दिवस आवासको भवनको छेउमा प्रक्षेपित। चलचित्रको साथसाथै, कार्यक्रममा फूड ट्रक, समुदाय जानकारी, र हाम्रो प्रीमियर प्रस्तुत गरिएको थियो डचटाउन गर्व भिडियो. डचटाउन ड्राइभ इन फिल्मको बारेमा थप पढ्नुहोस्.
मार्क्वेट पार्क चलचित्र रात: भेषमा जासूसहरू
जुलाई २th मा, २२ फिट फुलाउन सकिने एनिमेटेड साहसिक कार्यको लागि चलचित्र नाईटका लागि मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउसको अगाडि डाँडामा फर्के। भेषमा जासूसहरू। हामीसँग खाना ट्रक, मतदाता रेजिष्ट्रेसन र 2020 जनगणना जानकारी। जुलाई २०२० डचटाउन फिल्म रातको बारेमा थप पढ्नुहोस्.
मार्क्वेट पार्क चलचित्र रात: स्पाइडरवर्समा
दर्शकहरू मार्च २२, २०२० मा मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउसमा भेला भए स्पाइडर म्यान: स्पाइडरियसमा गर्मी को अन्तिम Marquette पार्क फिल्म रात को लागी। हामीसँग छिमेकीहरू र सामुदायिक संगठनहरूको ठूलो टर्नआउट थियो। अगस्त २०२० मा हाम्रो फिल्म रातको बारेमा थप पढ्नुहोस्.
NIC मा फिल्म रात: .२
छिमेकीहरू पार्किंगमा जम्मा भए छिमेकी इनोवेशन केन्द्र स्क्रीनिंगको लागि 42 सेप्टेम्बर २th, २०२० लाई जैकी रोबिन्सनको रूपमा लेट चाडविक बोसम्यान अभिनय गर्दै। हाम्रो सेप्टेम्बर २०२० फिल्म रातको बारेमा थप पढ्नुहोस्.
द्वारा शीर्ष फोटो बेन रोबिन्सन.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो नोभेम्बर 14th, 2020 .
DutchtownSTL.org डचटाउन चलचित्र रातहरू